China Laser Welded Tank orinasa sy mpanamboatra | Chemequip
Ny tanky takelaka dimple dia tavoahangy vita amin'ny vy tsy misy fangarony izay mitaky fanafanana na fampangatsiahana, izy io dia miaraka amin'ny "palitao" vita amin'ny takelaka dimple / ondana antsoina hoe takelaka misy jackets, toy ny ampahany tsy azo avela amin'ny casing. Ny takelaka vita amin'ny lasitra dia lasakan'ny milina fantsom-laser, avy eo azo ahodina amin'ny endrika irinao. Aorian'ny fametrahana ny Jacket dia mihombo ny takelaka ondana.
Inona ny tanky takelaka dimple?
Ny tanky takelaka dimple dia tavoahangy vita amin'ny vy tsy misy fangarony izay mitaky fanafanana na fampangatsiahana, izy io dia miaraka amina "palitao" vita amin'ny takelaka ondana / ondana, toy ny ampahany tsy azo avela amin'ny casing. Ny takelaka vita amin'ny lasitra dia lasakan'ny milina fantsom-laser, avy eo azo ahodina amin'ny endrika irinao. Aorian'ny fametrahana ny Jacket dia mihombo ny takelaka ondana.
Ahoana ny fomba ahazoana tanky lovia dimple?
Misy dingana telo hamoronana tanky takelaka dimple:
1. Ny lovia ondana / dimple dia ampidinin'ny milina fantsom-laser
2. Ny takelaka ondana / dimple vita amin'ny vy dia ahodina amin'ny masinina mihodina
3. Ny lovia ondana ahodina dia mihombo
Fanamarihana: ny takelaka vita amin'ny plastika dia amporisihina halefa amin'ny famonosana sy ny vidin'ny fandefasana.
Dingana 1 Welding
Dingana 2 Mihodina
Inona no ampiasaina amin'ny tanky takelaka dimple?
Ny tanky takelaka dimple dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fampiharana mangatsiaka isan-karazany:
(1) Ny tanky lovia dimple dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny ronono
(2) Ny tanky lovia dimple dia azo ampiasaina amin'ny indostrian'ny fanodinana labiera / divay / zava-pisotro
(3) Ny tanky lovia dobo dimple koa dia apetraka amin'ireo orinasa sokola alohan'ny hihena
(4) Ny tanky lovia dobo dimple dia mety amin'ny fananganana orinasa
Ny tombony azontsika amin'ny tanky takelaka dimple?
(4) Milatsaka ny tsindry ambany
Ny fitaovana famokarana ho an'ny tanky takelaka dimple
Ny fampisehoana vokatra tanky takelaka dimple.
Fampisehoana horonantsary dimple plate tank.
Previous: Milina fanala plate miaraka amin'ireo evaporator an'ny takelaka ondana
Manaraka: Dimple Clamp-on Jacket
Tifitra dimple mangatsiaka
Tavoahangy dimple namboarina
Tifitra labiera mihinana
Kitapo fampifangaroana palitao dimple
Sambo palitao mihinana
Dimple tanky famolavolana
Dimple tank ho an'ny indostrian'ny zava-pisotro
Tavoahangy azo ampiasaina ho an'ny factoty sôkôla
Dimple tank ho an'ny indostrian'ny ronono
Tavoahangy azo ampiasaina amin'ny fermenting factoty
Tavoahangy azo ampiasaina amin'ny fampangatsiahana ronono
Dimple tank ho an'ny indostrian'ny divay
Taratasy laser vita amin'ny lasitra fibre
Fanafihana dimple tank
Tifitra dimple tokana tokana
Fahombiazana avo lenta amin'ny varotra hafanana vita amin'ny ...
Masinina ranomandry slurry ara-barotra, Exchanger hafanana takelaka, Laser lasopy takelaka nianjera film chiller, Masinina ranomandry ranoka, Stainless vy Dimple palitao , Milatsaka sarimihetsika rano chiller ,